China na-akwalite mma & ntụrụndụ ụlọ ọrụ - China Tianjin Shengxin Sports ngwongwo
China na-akwalite mma & ntụrụndụ ụlọ ọrụ
The State Council agbala a plan ịzụlite mma na ntụrụndụ ụlọ ọrụ, mwube a mgbaru ọsọ na-amụba mmepụta nke ngalaba ulo oru na ihe karịrị 3 puku ijeri yuan ($ 442.5 ijeri) site 2025.
Site mgbe ahụ, a ike ilekota ga-kere, na ezi uche ụlọ ọrụ Ọdịdị, baa ọgaranya ọkọnọ nke mma ngwaahịa na ụlọ ọrụ, elu ina nke oriri na elu ruru eru ọrụ, dị ka ukara akwụkwọ wepụtara na Oct 28.
Ọ na-akpọ ka mma mma na ntụrụndụ ọrụ usoro na mba site na-emepe emepe kwa bodybuilding eme, n'èzí egwuregwu, na egwuregwu na omenala e ji mara, na-akwalite egwuregwu njem, na tụnyere Internet Plus na ụlọ mmepe.
Daily mma egwuregwu, dị ka bọl, basketball, volleyball, ping-pong, tenis na-agba ọsọ, a ga-n'ihu na-akwalite na-ewu ewu, kwuru na akwụkwọ. Ụfọdụ ndị ọzọ n'èzí na ejiji sports development kwesịkwara speeded elu, gụnyere oyi, ugwu, mmiri egwuregwu, moto egwuregwu, equestrian na golf. The egwuregwu na omenala e ji mara, dị ka Kung fu, dragon ụgbọ mmiri ma ọdụm ịgba egwú, na-gụnyere na plan.
The plan gbakwara ume ịzụlite sports njem na-akwado ụlọ ọrụ mmepe na teknụzụ, dị ka internet, Big Data na ígwé ojii Mgbakọ.
Dị ka ịzụlite ahịa egwuregwu na ụlọ ọrụ na-echegbu, na atụmatụ si mma na ntụrụndụ corporations na-elekọta mmadụ na òtù ga-ume-mụbaa ulo oru, na ụfọdụ àgwà Chinese ụdị na-ume na-achọ ihe nkwado si isi obodo ahịa - dị ka na-eme ka IPO na-esite nkekọ - iji mma ha mba competitiveness ma na-ụwa-klas ụlọ ọrụ.
Ọ na-akpọku ndị isi obodo na melite àkwá nyiwe na-akwado startups lekwasịrị anya mma na ntụrụndụ, karịsịa ndị na-ulo oru site na lara ezumike nká na-eme egwuregwu. Ke adianade do, nongovernment sports òtù na-ume-mụbaa ọrụ ha na-eji dochie, ruo n'ókè ụfọdụ, na ọha na eze egwuregwu ọrụ nyere site ọchịchị.
E wezụga na-akwado otu egwuregwu na ụlọ ọrụ, akwụkwọ nwekwara akpọ maka kachasị ụlọ ọrụ Ọdịdị. Nkezi nke ọrụ ngalaba ulo oru na ụlọ ọrụ na-ume-akpọlite. Eduga mma klọb, omume, na ulo oru ndọkwasi nile na oru ngo a ga-wuru ka ihe atụ maka ụlọ ọrụ mmepe.
Mpaghara na pụrụ iche na eke ego, gụnyere oké ọhịa, mmiri, Wetland o tinyere n'oru, ugwu na desat, na-ume ịzụlite kpọmkwem egwuregwu na dabara ya na obodo ọnọdụ, iji ike ha ika.
Ihe odide a kpọrọ maka ewu mma na ntụrụndụ ụlọ ọrụ site na-eji nke obodo mepere emepe ebe tinyere parklands, ohere iputa oghere, ụlọ n'elu ụlọ na n'okpuru ala - na-eke mma oghere n'ime minit 15 'anya.
Ke adianade do, ọ gbara ume, tinye n'ọrụ ẹdude ámá egwuregwu ego, ngwa ngwa ụlọ ọrụ na òtù na-emeghe ha na-eme egwuregwu ndị ọha na eze, na-agba ume na ụlọ akwụkwọ 'ụlọ ọrụ na-anọ na-emeghe mgbe klas na ememe.
A ọnụ ọgụgụ nke pụrụ iche mma na ntụrụndụ ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka ugwu na n'èzí ahụhụ, ntụrụndụ ụgbọala ahụhụ, na hiking na ịnya ọrụ ụgbọ kwesịkwara wuru, akwụkwọ kwuru.
Aka na nnyocha, mmepe na n'ichepụta ike n'ihi na mma na ntụrụndụ na ngwá, ndị ọchịchị ume ụlọ ọrụ, nnyocha sayensị oru, na-elekọta mmadụ na òtù na-etolite cross-ụlọ ọrụ ná njikọ aka, ma na-akwado mma ngwá n'ichepụta ụlọ ọrụ ịgbatị ha azụmahịa ọrụ ndi, na-eduzi esenidụt mergers na mbụ, nkwonkwo n'atụmatụ, na nkwonkwo development.
The akwụkwọ zubere akwado ụlọ ọrụ na-emepe emepe ahaziri ngwá maka iche iche mkpa nke dị iche iche afọ iche iche, nakwa dị ka nnyocha na ngwá na n'ókè technology dị ka wearable sports ngwá na mebere eziokwu sports akụrụngwa.
N'otu oge ahụ, metụtara atumatu ga-mma na-enye ndị ọzọ na mma na nchebe maka dị iche iche mma dị iche iche, popularize ọmụma sayensị nke mma, na-adọta na-elekọta mmadụ ego itinye ego na egwuregwu ụlọ ọrụ, na-ewusi mma management talent, nakwa dị ka iru ọrụ ibiere na quality ọkọlọtọ na mma na ntụrụndụ oru na usoro nke ọrụ, nkà ọzụzụ, ọrụ management, akụrụngwa-ewu, na akụrụngwa n'ichepụta.